Injineli yeApple inoxanduva lweNight Shift kunye neSueño ishiya inkampani | Ndisuka mac
Sithetha ngoRoy Raymann, injineli ejongene neNight Shift kunye nePhupha eshiya inkampani ngaphandle kokwenza ingxolo enkulu. Ukufika kutshanje kweNight Shift ukhetho kuhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza ye-macOS kusishiye sinencasa emnandi, kuba kuyinyani ukuba umsebenzi unomdla kuthi abo bachitha iiyure ezininzi phambi kweMac kodwa Ndingathanda enye entsha kule nguqulo. Ngokusengqiqweni oku akunanto yakwenza nokuhamba kukaRaymann, ekubonakala ukuba uyishiyile inkampani yaseCupertino emva kokutyikitya kwakhe ngo-2014 ube yinxalenye yeqela lokuLawula iiLebhu zokulala, njengo-Sekela Mongameli weSayensi yokulala.
Kule meko, akwaziwa ukuba sijamelene nokuhamba ngokuzithandela ngokupheleleyo kwaye siqwalasele ukumka okanye ngokuchaseneyo ikhontrakthi yale injineli intsha iphelile kwaye ayivuselelwa. Ngayiphi na imeko uRaymann uthathe inxaxheba kuphuhliso lweNight Shift eApple, oko ithoni etyheli esinokuthi siyinike iscreen se-iPhone yethu, i-iPad okanye iMac ukunqanda ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Olu khetho lulungile kuthi kuthi abo bachitha iiyure ezininzi phambi kweqela njengoko likhusela amehlo ethu.
Kwelinye icala, uthathe inxaxheba kwi-alarm alarm application enendlela yokulala. Olu khetho lufumaneka kuqwalaselo lwe-alamu ekunene kukhetho oluphakathi kunye nokuba yintoni ivumela ukuba "silawule" ngandlel 'ithile iiyure esizichitha silele kwaye iyasivumela ukuba sisebenzise i-alamu enezandi ezikhululekileyo ukuvuka kakuhle. Olu khetho lunokuqwalaselwa ngeentsuku zeveki kwaye lubhalisiwe kwisixhobo ngaphakathi kwesicelo seSaldud, esinokuthi sigcine ukulala kuso.
Ngokomgaqo uRaymann wayejolise ekuphuculeni ukhetho lwe-Apple Watch kwaye akucaci ukuba iinjongo ezicetywayo ziye zafezekiswa okanye ngokulula ukuthengwa kwenkampani yaseFinland Ibhedi, sisiqalo sobuvulindlela kwi "sleep tracker".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Injineli yeApple inoxanduva lweNight Shift kunye neSueño ishiya inkampani
Umdlali weMidiya, umdlali okhululekileyo ohambelana nazo zonke iifomathi